Syria: Manangona Fanohanana Eran-tany ny Fitorevahana Virtoaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 9:06 GMT
Ampahany amin'ny tatitra ataonay manokana mikasika ny Hetsi-panoherana tao Syria tamin'ny 2011 ity lahatsoratra ity.
Raha miditra amin'ny fahavalon'ny volana nisiany ny fikomiana ao Syria, mihatia mamorona ireo mpikatroka mafana fo mba hahazoany antoka fa tsy hitsahatra ny fifantohana eran-tany mankany amin'ilay zava-mitranga. Mangataka ny tsirairay hampiakatra lahatsary ho fanehoana ny firaisankina amin'ireo Syriana mpanohitra ny hetsika fisantarana iray avy amin'ilay Tambajotram-baovao malaza Sham– fikambanana fampahalalam-baovao eny ifotony izay nisongadina nandritra ny rivo-panovàna Syriana mba hanambatra sy hizara ireo lahatsarim-baovao. Ahitàna dika samihafa anà fanambarana iray ireo lahatsary izay navoaka tao amin'ny kaonty Youtube-n'ny SyrianSitIn avy eo:
Miray hina amin'ny vahoaka Syriana aho. Laviko ny herisetra sy ny famonoana izay ataon'ny manampahefana Syriana amin'ny vahoaka Syriana tsy mitam-piadiana. Ary satria fandraisana anjara amin'ity heloka ity ny fahanginana, dia manambara ny fandraisako anjara amin'ny Fitorevahana Syriana ao amin'ny Youtube ny tenako.
Ao anatin'ity lahatsary ity [ar], maneho ny firahalahiany ny Syriana iray avy any amin'ny faritra misy mponina ao Golan:
Maneho ny fanohanany [ar] ny vehivavy tanora iray avy any Alzeria, miaraka amin'ny fanevan'i Syria sy ny an'ny fireneny ao aoriany:
Nahazo lahatsary mihoatra ny 200 ilay hetsika fisantarana ny Fitorevahana Syriana
Saika amin'ny teny Anglisy sy Arabo ny ankamaroan'ireo lahatsary nampiakarina. Anatin'ireo lahatsary sasany, tsy mitodika amin'ny kamerà na misarona arotava ny tarehin'ilay mpandefa ny lahatsary, angamba satria mipetraka ao Syria izy ary tsy tiany ho fantatra. Maro tamin'ireo nandefa lahatsary no nirakitra ilay fanambarana an-tsoratra nomena, raha toa ka nanampy ny heviny na ny faniriany manokana kosa ny sasany. Hatreto, efa nahazo lahatsary teo amin'ny 250 teo manerana ny tontolo Arabo ilay hetsika, ary koa avy amin'ny Etazonia, Alemàna, Islandy, ary Kanadà.
Avy any Toronto, Kanadà, mamoaka lahatsary maneho firaisankina ‘The Ugly Truth’ (Ny Marina Mahatsiravina):
Nandefa ny anjara lahatsariny i Birgitta Jonsdottir, mpikambana ao amin'ny Parlemanta Islandey sy ao amin'ny Antenimeran'ny OTAN:
”Te haneho ny firaisako hina sy ny fanohanako ny vahoaka Syriana be herim-po aho, izay nanao hetsi-panoherana isan'andro, isam-bolana, tsy araka izay nandrasana.”
Nandray anjara tanatin'ilay ezaka ihany koa i Leila Nachawati, Syriana-Espaniola mpiara-miasa amin'ny Global Voices:
”Manatevin-daharana ilay fitorevahana Syriana aho satria aingampanahy ho an'iza na iza mino ny fahafahana sy ny rariny ary ny zon'olombelona ny vahoaka Syriana…Ary tena reharehako ny vahoaka Syriana sady mihorohoro aho noho ny haavon'ny herisetra asehon'ny fitondrana Syriana.”
Ireo rehetra izay te handray anjara amin'ny fitorevahana Syriana dia afaka manao izany amin'ny fandefasana ny lahatsariny any amin'ny SyrianHub@Gmail.com.